Accueil > Gazetin'ny nosy > Hosoka amin’ny raharahan-tany: Mitohy hatrany noho ny kolikoly avo lenta
Hosoka amin’ny raharahan-tany: Mitohy hatrany noho ny kolikoly avo lenta
Mampiaiky volana ny maro mihitsy, ary efa tsy matahotra manao ratsy intsony ny olona sasany fa sahy miseho andro e! Tsorina fa izany no isan’ny ako ratsin’ny fianahan’ny kolikoly eto, ka tsy menatra na matahotra intsony ny sasany satria matoky tena fa tsy misy tsy vitan’ny vola sy ny fahafantarana olona any ambony any.
Niteraka resabe teto tao ho ao ny fivarotana an-tsokosoko teo anivon’ny fitantanan-draharaham-panjakana ny Tanàna misy ny “Villa Elisabeth” eny Ivandry, izay nomen’ny fanjakana nipetrahan’ny Pr Zafy Albert mianakavy noho izy filohampirenena teo aloha. Efa notaterintsika teto amin’ity gazety ity ny fahasahian-dRavalomanana nanampatra fahefana fony izy filohampirenena ka naka na nanodina ho azy ny tranom-panjakana sy tanim-panjakana ary tanin’olon-tsotra sy tranon’olon-tsotra eny Faravohitra eny.
Ankehitriny dia akory indray ny hagagan’ny maro raha nahita ny fanambarana navoakan’ny CNaPS fa ny taniny mitondra ny anarana hoe “Mahasoa CCXXI”, mitondra ny Titra laharana 51.191-A eny Ankorondrano, Antananarivo, mirefy 5 Ha sy 12 ara ary 50 Sa, dia misy misoloky hivarotra.
Nambaran’ny CNaps mivantana tao anatin’ny fanambarana navoakany fa hosoka ary tsy manan-kery ny ambara fa “alalana hivarotra” na “mandat de vente” izay hoe nifanaovan-dRavelonanosy Andriantefy Hubert Bruno, mitonona ho “chargé de vente”-n’io tany io, ary hoe misolotena ny Cnaps, sy i Rija Marie Razafindrakoto, izay mitonona fa hanao ny tetik’asa antsoina hoe “projet d’Etudes architecturales” ho amin’ny fanamorana ny fivarotana ny tany.
Navoakan’ny Cnaps ampahibemaso amin’ny antsipirihany ao anatin’ny fanambarana mihitsy moa ny mombamomba azy roalahy ireo, ary nivantana koa ny Cnaps nilaza fa “hanenjika ka hitory azy ireo araka ny lalàna manan-kery amin’izany hosoka sy fampiasana hosoka izany”.
Marihina fa malaza ho lava tanan’akanjo any anivon’ny fitsarana any sy eo amin’ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fananan-tany izy ireo, ary mirehareha ho mahazo avara-patana any anivon’ny sehatra avon’ny Hvm any.